Udokotela Wamazinyo waseKapa eduze kwami ​​enezibuyekezo ezingaphezu kuka-170 - Udokotela Wamazinyo iSea Point
Udokotela wamazinyo eduze kwami ​​uyabuyekeza.
Ingabe ufuna “udokotela wamazinyo eduze kwami” ngoba awufuni ukushayela ibanga elide kakhulu? Nazi izizathu ezingaphezu kuka-220 zokucabangela ukushayela eSea Point.
Mhlawumbe i-Sea Point ayikude kakhulu ukuthi ungayishayela uma ufuna ukuzwa umehluko we-OptiSmile. Kwa-OptiSmile, sinamagumbi okwelapha ayisikhombisa kanye nochwepheshe abambalwa abaqeqeshwe kakhulu abatholakalayo ukuze bakunikeze ulwazi olungcono kakhulu lukadokotela wamazinyo eKapa.
Singudokotela wamazinyo womndeni kanye nokwelashwa kwe-orthodontic sisebenzisa i-Invisalign clear aligners esebenzayo.
Asinankontileka yanoma yiziphi izinsiza zokwelapha ezifana ne-Discovery noma i-Momentum, kodwa iningi leziguli zethu linalezi zinhlelo, futhi sizinikeza ama-invoyisi nezitatimende ezinekhodi ukuze zikwazi ukucela ukubuyiselwa ku-medical aid yazo.
Izikhungo zamazinyo ezihlinzeka ngokunakekelwa kwamazinyo akulula ukuzithola njengoba izinqubo eziningi zamazinyo ziyimibukiso yomuntu oyedwa.
Ngakho-ke sicela uhlole imininingwane yethu yokuxhumana futhi usithumele i-WhatsApp noma ushayele namuhla.
Impilo yakho yamazinyo ibalulekile, ngakho ungalibali ukushaya ucingo.
Nokho, uma udlula ohlwini lodokotela bamazinyo futhi udidekile, manje yisikhathi sokuma futhi uthathe isinyathelo.
Ingabe odokotela bamazinyo abanezindinganiso eziphakeme babalulekile kuwe?
Ingabe ubheka uhlu lodokotela bamazinyo kanye nezinqubo zamazinyo zokwelashwa kwamazinyo eKapa? izikhungo zamazinyo, kanye nodokotela bamazinyo boMndeni ukuze bathole ukunakekelwa kwezempilo komlomo okuthuthukisiwe kanye nokwelashwa kwamazinyo okuseqophelweni eliphezulu.
Awuzizwa ukhululekile ukukhetha ngokungahleliwe?
Ingabe udidekile nge-medical aid?
Ucabanga ukuvakashela udokotela wamazinyo ukuze uthole ukunakekelwa kwamazinyo?
Ugcine nini ukuphatheka kabi ngamazinyo?
ukwenziwa mhlophe kwamazinyo
ukwelashwa kwamazinyo ayisigwegwe
Ngokusekelwe ku 255 Izibuyekezo
Ngokusekelwe kuzibuyekezo ze-226
Bona konke ukubuyekezwaBhala ukubuyekeza
18:48 24 Meyi 22
Hambisa phansi ukuzizwisa okuhle kakhulu engake ngaba nakho kudokotela wamazinyo! Wonke umuntu unobungane kakhulu, ikhwalithi yesevisi ayinakuhlulwa - konke kuchazelwa wena ngokuningiliziwe. Imibono iyamangalisa futhi izokwenza konke okusemandleni ukuze uzizwe ukhululekile, kungakhathaliseki ukuthi ukuthatha ikhefu phakathi nesikhathi sakho sokuqokwa noma ukukunikeza ingubo yokulala ngoba kumakhaza! (Awukwazi ukukhohlwa isistimu yomsindo emangalisayo abanayo lapho ungadlala khona noma yimuphi umculo owufunayo ngesikhathi sakho!)
12:03 23 Meyi 22
Ukuqokwa kwami ​​nodokotela wezokuhlanzeka e-Optismile bekuhlezi kukuhle. Ukuhlanzeka okuphelele kodwa okuthambile engake ngakubona. Amazinyo ami ahlala emangalisa ngemva kokuhlanzwa. Siyabonga kulo lonke ithimba le-Optismile - nikwenza kube yintokozo yangempela ukuvakashela udokotela wamazinyo!
UMichael ten Hope
12:02 23 Meyi 22
OptiSmile epitomize lokho mastery imayelana; isevisi enhle, ulwazi lwangempela kanye nothando oluphuphumayo olubonakala kuwo wonke umuntu emtholampilo. Laba bafana bayawukhathalela umsebenzi wabo wezandla, futhi kuyathandeka ukuthola abantu abanjengalaba. Futhi bayiqembu elikhulu lodokotela bamazinyo futhi, abaphatha izidingo zempilo yamazinyo ngendlela eguquguqukayo nebanzi. Wenze kahle futhi ngingabancoma ngokungagodli.
13:52 18 Meyi 22
Okuhlangenwe nakho okuhle. Maphakathi nesifundo sami futhi ngihlabeke umxhwele ngoshintsho engilubonayo! UDkt Harris kanye nabasebenzi banobungane kakhulu futhi banolwazi, futhi bayacophelela ekuchazeni inqubo nanoma yimiphi imibuzo.
14:04 17 Meyi 22
Sincoma kakhulu uDkt Clifford Yudelman kanye nabasebenzi bakwa-optiSmile!
15:36 11 Meyi 22
UDkt. Shaa: Udokotela wamazinyo ongcono kakhulu engake ngaba naye, izandla phansi!
09:06 06 Meyi 22
Alikho ihhovisi lamazinyo elingcono kune-OptiSmile!Ngidabuka eJalimane futhi ngokombono we-Google kanye nombono ovamile, odokotela bamazinyo e-Germany kufanele babe ngelinye elihamba phambili emhlabeni, nokho, angikaze ngiye kuDokotela Wamazinyo waseJalimane osondela ngisho nakakhulu kuye. ikhwalithi kanye nekhono le-OptiSmile!Ngafika kwa-OptiSmile okokuqala ngqa ngo-2021, ngemva kokuzabalaza isikhathi eside nokulunywa okungakhululekile nezinye izinkinga. Ngakho-ke ngahamba phakathi kwezinye izinto ngokwelashwa kwe-Invisalign noDkt Harris. Ngimangazwe kakhulu ngolwazi nokuzinikela kukaDkt Harris emkhakheni wakhe kanye nokunaka kukaDkt Clifford imininingwane yawo wonke amazinyo. Futhi, ngangihlale ngizizwa ngamukelekile yiwo wonke umsebenzi ongayedwa. Angenzi ihaba uma ngingathi, ngingandiza ngiye eKapa ngiyothola i-OptiSmile ngisuka kwezinye izingxenye zomhlaba!I-OptiSmile ngokuqinisekile ingaphezu nje kwehhovisi lamazinyo, angikwazanga ukuyincoma kakhulu!
13:00 05 Meyi 22
Ngifike endaweni efanele umngane wami wangitshela ukuthi ngingathola kuphi ukumamatheka kwesigidi samadola😁futhi ngisanda kwenziwa amazinyo ami ngijabule kakhulu ngemiphumela futhi abantu banobungane futhi bakwenza uzizwe usekhaya kakhulu.
10:00 04 Meyi 22
Ukunakekelwa okumangalisayo kakhulu kanye nokwelashwa komuntu! Iqembu elimangalisayo elenza umsebenzi omuhle futhi lidala ukumamatheka okuhle! Ngingancoma kakhulu i-Invisalign 😁
18:30 28 Ephreli 22
UDkt Cara Loubser ubemuhle!Ngesaba impela ukuya kudokotela wamazinyo, kodwa wakwenza kwaba lula. Lokhu kusho okuthile ngemva kokuchitha cishe amahora angu-6 kuleli sonto kudokotela wamazinyo. NGIYABONGA, NGIYABONGA, DR LOUBSER!!!!
11:56 28 Ephreli 22
Ngiye e-Optismile ngesonto eledlule okokuqala ngabhukhelwa ukuhlanzwa amazinyo intokazi enhle egama layo linguFazlin. Akagcinanga ngokwenza umsebenzi oncomekayo, kodwa futhi wachitha isikhathi esanele ngaphambi nangemva kokwelashwa kwami ​​engifundisa ngokuhlanzeka kwamazinyo okuphelele. Yeka indlela emnandi engibe nayo emisebenzini yamazinyo enhle kunawo wonke engake ngawavakashela. Ngokusobala abaphathi bachitha imali eningi. isikhathi namandla okuqeqesha abasebenzi babo kanye nabanye ochwepheshe ngoba ngaba nombono wokuthi akekho ogejayo.Ngibheke ngabomvu ukubona uDkt Clifford Yudelman ngenyanga ezayo ukuze ngihlolwe amazinyo.Optismile uneklayenti elisha impilo yakho yonke!Siyabonga futhi qhubeka nomsebenzi wakho omuhle kakhulu.I-Hardus BesterBantry Bay, eKapa.
17:42 27 Ephreli 22
Ngasuka ekubeni namazinyo ayisigwegwe ngempela enganginamahloni okuba namazinyo aseduze aphelele phakathi nezinyanga ezingu-6 nge-Invisalign. Okuhlangenwe nakho kwakushesha futhi kulula. I-Optismile yinhle ngempela - inobungane kakhulu, ihlelekile futhi iyasiza. Siyabonga uDkt Harris ngolwazi! Nakanjani ngizobuya kuzo zonke izidingo zami zamazinyo.
12:27 14 Ephreli 22
Okuhlangenwe nakho okumangalisayo! Ngike ngaya kudokotela wamazinyo emhlabeni jikelele. Ngingasho ngokweqiniso ukuthi lokhu bekungomunye wesipiliyoni esihle kakhulu. Kusukela enqubweni yabo ephumelelayo yokubhukha i-what's app, kuya ekuboniseni ucingo ngaphambi kokuthi nginqume ukuqhubekela phambili nabo. Ukuze empeleni kwenziwe umsebenzi. Ihhovisi ngelesimanjemanje, linobuchwepheshe bakamuva futhi abasebenzi bayamangaza. Nakanjani ngizoza lapha noma nini uma ngibuya eNingizimu Afrika. Siyabonga OptiSmile!
12:24 14 Ephreli 22
U-Gillian Van 't hof
09:25 08 Ephreli 22
Iqembu elimangalisayo, elichwepheshile nelingenekayo elinentshisekelo yangempela enhlalakahleni nasenjabulweni yakho. Injabulo ukubhekana nayo.
14:53 06 Ephreli 22
Ubani owayengacabanga ukuthi ukuvakashela udokotela wamazinyo kwakuyoba ubumnandi! Kusukela kunqubo elula, elula yokubhuka, ukuya kubasebenzi abamukelayo abacabangayo nabamukelayo, ukuya ekuhloleni okuchwepheshile nokunemininingwane. Iphelele ezigulini ezinovalo, noma izandla ezindala ezikhathele udokotela (namazinyo). Kunconywe kakhulu.
Ngibe nolwazi oluhle kakhulu futhi ngizobancoma nakanjani.
Ubungcweti obukhethekile, ububele nomsebenzi! Ngihlanza amazinyo ami njalo lapha, futhi muva nje ngibe nokuhlangana okuthile kwamazinyo ami angaphambili ukuze ngibushelelezi indawo futhi ngisuse ukushintsha kombala. Ngihlabeke umxhwele kakhulu!
Amakhasimende ami aphesheya ahambele umhlaba futhi avakashele izinqubo ezimbalwa zamazinyo, lokhu bekuyisipiliyoni esihle kakhulu esake sake safika! Ukuhlinzwa kuhle ngendlela emangalisayo ngaphakathi, abasebenzi banomusa futhi banochwepheshe futhi uDkt Harris ubemangalisa nje! Ngiyabonga kakhulu
Iqembu elihle kakhulu! Ubungane futhi professional. Isevisi engcono kakhulu! Ngiyabonga 👏🏻
Ngaba nakho okujabulisayo ngempela nge-Optismile. Ngangingene ngiyobabona ngemva kokuba ngisezinhlungwini ezibuhlungu nezinyo elibuhlungu. Ngisebenzise ulayini wabo we-whatsapp ukuze ngibabambe futhi babelungile ngesikhathi sokuphendula ngokushesha futhi bangixhumanisa noDokotela Wamazinyo ukuze ngixhumane nevidiyo eku-inthanethi. Ngalo lolo suku ngakwazi ukubona udokotela wamazinyo futhi ngathola ukwelashwa ngemva kwalokho ngabhukhelwa ukuyokhishwa amazinyo. Ukukhishwa kwezinyo kwakungebuhlungu neze futhi kukhululekile ngangokunokwenzeka. UDkt Shaa Hurribance wayecophelele kakhulu futhi ezolile, echaza zonke izinqubo kuzo zonke izinyathelo zendlela. Konke kwakushesha futhi kulula. Ngingancoma nakanjani izinkonzo zabo.
Ngabona uDkt Clifford Yudelman ngemuva kokuthi ibhodi lishaye izinyo lami langaphambili ngenkathi ngintweza ezinsukwini ezi-3 ngaphambili futhi ngangidinga ukulungiswa okuncane endaweni yokugcina izinto engemuva kwamazinyo ami. Ngihamba emhlabeni wonke ngathola i-Optismile eKapa ngokusebenzisa i-Google! Iqembu lonke, wonke umuntu wayenobungane, kodwa ikakhulukazi kuDkt Clifford Yudelman kanye no-Akhona umsizi wamazinyo! Benza umsebenzi omuhle kakhulu bechaza isinyathelo ngasinye! Ngingabuya lapha noma nini! Ngiyabonga kakhulu ngosizo lwenu!
Uchwepheshe kakhulu futhi unobungane. Ngizizwe ngikhululekile kukho konke ukuzizwisa. Ngingancoma kakhulu.
Okokuqala nje ngiye ngajabulela ukuya kudokotela wamazinyo!
Umuzwa ongcono kakhulu owake waba kudokotela wamazinyo. Imvamisa ngiyakwesaba ukuqokwa kwami ​​udokotela wamazinyo kodwa i-OptiSmile izokushiya ujabulile ngokuvakasha kwakho. Awukwazi ukungahambi kahle nge-Optismile!
U-Claire wenze umsebenzi omuhle wokulungisa ikepisi lami elavela endizeni yami eya e-CT. Wayeshesha, esebenza kahle futhi enamanani anengqondo. Ugcine iholidi lami!!
Ngaba nesipiliyoni esimnandi, esiphumuzayo nesijabulisayo kwa-OptiSmile.I-Fazlin yenza isiqiniseko sokuthi ngizizwa ngikhululekile, ngaphambi kwenqubo, futhi ngenzela mina uqobo lokho okwenziwayo. Ngizobuya nakanjani. Inkonzo enhle ngokumamatheka 😁
UDkt. Alice Penn
Izinkonzo zamazinyo, zokuhlanzeka kanye nezamazinyo zinhle kakhulu. Abasebenzi bawusizo kakhulu, banesizotha futhi banobungane. Ukwenza ama-aphoyintimenti kulula futhi kulula. Ayikho into eyinkinga kakhulu eqenjini. Wonke umuntu unobungane, unozwelo futhi uchwepheshe kakhulu. Izakhiwo azinabala, zinezinsizakusebenza ezingenasici ezihambisana nobuchwepheshe nemishini ehamba phambili. Angikaze ngempela ngithole ukunakekelwa okungcono kwamazinyo kanye ne-orthodontic. Ithimba lingochwepheshe bezinkanyezi, ochwepheshe emkhakheni wabo.
Nakanjani umkhuba omuhle kakhulu okufanele ngiye kuwo kuze kube manje. Ukukhathazeka kwami ​​​​kwamazinyo kuphelile. Indawo ihlelekile, ihlanzekile futhi abasebenzi bayasiza kakhulu. Ngiyabonga uDkt Shar nabasizi bakhe abahle abanginikeze okuhlangenwe nakho okungenabuhlungu. Izoncoma nakanjani noma ngubani ukuthi aye kulo mkhuba.
Bonke abasebenzi babenobungane ngokwedlulele futhi bangenze ngazizwa ngikhululeke kakhulu!
Ukuvakashela udokotela wamazinyo okokuqala (faka ngokwedlulele) isikhathi eside. Yeka injabulo okwakuyiyo! Okuhlangenwe nakho okunethezekile, okuphrofeshinali nokwamukela kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni. Imishini ephezulu ikwenza kuthakazelise futhi kukhululeke. Waneliseke kakhulu ngokuhlanza (uDkt Shaahir) kanye nokubonisana kwe-Invisalign noDkt Harris. Ngibheke phambili ekuvakasheni okulandelayo.
19:27 28 uJan 22
I-Optismile iwumkhuba omuhle kakhulu wamazinyo engake ngaba kuwo. Kusukela ngingena ngazizwa ngamukelekile futhi ngikhululekile. Nginovalo ngodokotela bamazinyo kodwa konke kube lula kusukela uBuhle ezongihlangabeza kuDkt Natalia van Niekerk engichazela yonke into kabanzi futhi engibeka ngokukhululeka ngokuphelele. Yena noBuhle bazinika isikhathi sokungazi, baqonde izindaba nemigomo yami futhi bangiphathe ngozwelo futhi njengomuntu. Sekuyisikhathi eside ngisebenzelana nodokotela bamazinyo abaningi ezingxenyeni ezihlukahlukene zomhlaba kodwa uDkt Natalie, uBuhle kanye nethimba lase-Optismile babeka izinga elisha lezinga nesevisi engingakholwa ukuthi iqhathaniswe kwenye indawo futhi kanye. Nginombono omuhle ngodokotela wamazinyo futhi okokuqala ngqa ngingu-Optimisitc mayelana nokumamatheka kwami. Awukwazi ukungahambi kahle nge-Optismile.
13:12 25 uJan 22
Abasebenzi abakhulu nemiphumela emihle kakhulu
UManon van Gaal
21:13 21 uJan 22
Ukuvakashela udokotela wamazinyo kwakuhlale kuyinto edingekayo futhi engathandeki, ngaze ngaya e-OptiSmile. Bahlela yonke into kahle, izisebenzi zinobungane ngendlela emangalisayo futhi ukuvakasha ngokwako kuzwakale sengathi ngiye endaweni ye-spa: Ngabuyela ekhaya ngikhululekile futhi ngishajwe kabusha futhi kwaba sengathi ngizithengele ukwelashwa kahle esikhundleni sokubonwa ngudokotela wamazinyo (akukho mahlaya!). Empeleni bekungokokuqala empilweni yami ukuthi udokotela wami wamazinyo angahloli amazinyo ami kuphela kodwa impilo yami yonke yobuso, futhi wachaza yonke into kahle. Sincoma kakhulu ukuya lapha!
11:53 21 uJan 22
Isevisi esezingeni eliphezulu kakhulu nomsebenzi ongawucela. Iqembu liphume ngendlela yalo ukuze liqinisekise ukuthi ngiyanakekelwa futhi lingigcina nginolwazi lwakamuva ngakho konke engangidinga ukukwazi. Umkhuba ngokwawo kufanele kube omunye wemihle kakhulu emhlabeni enokubukwa ogwini lwase-Atlantic kanye naseRobben. Island. Ngibonga kakhulu kuDkt Shaa, Beatrice, Dr Yudelman kanye no-Akhona ngolwazi olumangalisayo nemiphumela edonsa umoya. Ngizobuya nakanjani.
06:22 21 uJan 22
Isevisi yangempela nobungane.
12:48 17 uJan 22
11:32 14 uJan 22
Angikwazanga ukujabula kakhulu ngomphumela wokwelashwa kwe-Invisalign ovela kudokotela wamazinyo uDkt Harris Smeyatsky kanye nokuqedwa kwezimonyo kukaDkt Clifford Yudelman. Ngeqe kulokho engangikulindele ngesigamu sesikhathi ebesilindelwe. Izinqubo ze-American Invisalign azishibhile, kodwa amazinyo amahle ukutshalwa kwezimali okungcono kakhulu umuntu angakwenza. Izame!
08:34 12 uJan 22
13:25 05 uJan 22
Best experience I've had, the whole team is amazing ngiyabonga Dr Shaa, a very patient, kind and professional Dr. Umlomo wami uzizwa uhlanzekile nakanjani ngizobuya. Benginganikeza 10 stars not 5 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟 🌟🌟🌟
Ngomhla zingama-21 kuZibandlela ngephula ipuleti lami lamazinyo esikhashana futhi ngathintana nenkonzo yamahora angama-24 ye-Optismile. Naphezu kwehora elidlule uClifford wangithinta ukuze athole inkinga. Ngamthumelela izithombe zepuleti eliphukile wangidlulisela Elabhorethri Yamazinyo Ilebhu ngomhlaka-22 Dec yathatha amahora angu-5 ukubuyisela ngokuphelele ipuleti lami senza umsebenzi oncomekayo wokuliqinisa nokulisebenza kabusha ukuze lilingane kahle. Kungcono kakhulu kunakuqala. UClifford ubelokhu ethintana phakathi nayo yonke inqubo ngaphandle kokuthi kube khona imbuyiselo ngesikhathi sakhe. Kumelwe ngivume ukuthi angikaze ngihlangabezane nenkonzo efanayo e-Jhb futhi ngiyajabula ngokuthi insizakalo enjalo ikhona e-CT. Wonke amandla empumelelweni yayo eqhubekayo. Siyabonga kakhulu uClifford ngomqondo wakho wokuqamba kanye nokulandela kwakho Siyabonga L
Izisebenzi zazingamukele kahle futhi zanginakekela kakhulu kusukela ekuqaleni kokuhlinzwa kwami ​​kwamazinyo ngokumamatheka okukhulu kwaze kwaba sekupheleni. Udokotela wenza isiqiniseko sokuthi ngikhululekile lapho ngihlinzwa futhi wanginika ukushintshwa kokumamatheka okukhulu, namanje angikholwa ukuthi ubuhle bami ukumamatheka kuyinto. Ngiseneminye imigudu okumele ngiyenze kodwa ngijabule ngenkonzo futhi nakanjani ngizobuyela emuva.
URobyn Samuels Zinman
Mthande lo dokotela wamazinyo! Umnene futhi unomusa
USharne Fergie Swart
16:44 19 Septhemba 20
UDokotela Mandy ungudokotela wamazinyo omnandi kunabo bonke engake ngahlangana nabo empilweni yami. Ngeke ngiphinde ngiye kudokotela wamazinyo ohlukile. Uyigugu eliphelele. Wayenesineke futhi eqonda futhi kwakucishe kufane neseshini yezengqondo kanye ne-denistry ngasikhathi sinye. Bengizikhalela ngempilo yami ecindezelayo nokuthi kungani ngigaya amazinyo ami njll nginikeze izeluleko ezinhle futhi ngisebenza kahle kakhulu. Kwakungokuhlangenwe nakho okumnandi ngempela.
Umsebenzi omuhle kanye nensizakalo. Udokotela wamazinyo ufike ngokukhethekile ngoMgqibelo ukuzolungisa izinyo lomkhumbi ovakashile! Ihhovisi eliphambili kwezobuchwepheshe futhi elihle elibheke i-Atlantic Ocean!
Isipiliyoni esihle kakhulu kudokotela wamazinyo kude!
Umkhathi omuhle, abasebenzi abamangalisayo nensizakalo enhle kakhulu. Impela uzoba yikhasimende elibuyayo! ✨
I-07: 43 22 Aug 19
Isimo samazinyo obuciko. Wayekhiphe izinyo elingenabuhlungu futhi udokotela wamazinyo wayenolwazi oluningi ngalokho ayekwenza. Cishe wazumeka esihlalweni. Ncoma kakhulu.
UMelanie Venter Niemand
I-17: 51 09 Aug 19
Ngibe nenkonzo enhle kunazo zonke ezake zavela ku-Emma King, futhi ngaphuma ngimamatheka okuhle engake ngaba nakho.
Impela isilinganiso sezinkanyezi ezi-5 esivela kimi!
Ngemuva kokujaha ukuthola ukwelashwa okuphuthumayo kwezimpande futhi ngisezinhlungwini ezinzima izinsuku ezingaba ngu-4 ngabonwa nguDoc Kaveer owayengeyena uchwepheshe kuphela kodwa owaziyo ukuthi angakhuluma kanjani nawe ngakho konke akwenzayo!
Ukusuka ekuhlangane naye endaweni yokwamukela kuze kube sekuqedeni impande (engangethukile ukuyenza ngenxa yawo wonke umuntu owayengitshela ukuthi kungaba buhlungu kanjani ukuba nomsele) wangenza ngazizwa ngikhululekile futhi waqinisekisa ukuthi konke kwakukhona kulungile kuyo yonke inqubo!
UDoc Kaveer akagcini ngokwazi akwenzayo futhi banobuchwepheshe namazinyo wakamuva e-optismile ukuqinisekisa ukuthi unakekelwa kahle!
O nolwandle lusizile kunjalo!
Ngiyabonga futhi uDoc Kaveer !!! Ubuhlungu bukhululekile futhi buyamomotheka!
16:38 08 uJan 19
Ngibe nokuhlangenwe nakho KAKHULU KAKHULU no-Emma ku-OptiSmile 🦷 Ungumuntu othambile, onomusa nobuchwepheshe be-ultra, ingasaphathwa eyokungcono kakhulu ebhizinisini uma kukhulunywa ngokwenza mhlophe iZoom The️ Isikhungo sisezingeni lomhlaba elinokubukwa okuhle kwezilwandle futhi ama-reciptionists anobungani futhi ukwamukela 🌊 #zoomwhitening
UPierré du Plessis
I-08: 15 07 Aug 18
Akuwona umkhuba wakho wamazinyo ojwayelekile. Benza okungenakwenzeka kwenzeke. Laba bantu bangama rock rock !! Ngibheke phambili ekuvakasheni kwami ​​okulandelayo 😀
19:53 08 Ephreli 18
16:05 04 Ephreli 18
Hhayi njalo lapho ungasho khona ukuthi unempande enkulu, kepha ngiyaqiniseka! Kumuntu owesaba udokotela wamazinyo, elwela ukuba ndikindiki futhi athuthumele lapho ecabanga ngokuhlala esihlalweni, bengingeke ngijabule ukuthi ngikuthole kanye neqembu lakho! UDkt Ratan, ngiyabonga ngokuba nesineke, ukungifundisa nokugcina izinyo lami! Ukumamatheka okugqamile yonke indlela !!
ULeigh-ann Hayward Paterimos
15:47 03 Meyi 17
UDkt Kaveer Ratan noDkt Clifford Yudelman babemangalisa ngendodana yami eyathola ingozi ngempelasonto, futhi yaphuka izinyo layo langaphambili phakathi. Babesebenzisana nami naye (umama o-hysterical) ngakho-ke ngokomsebenzi, babethembekile bethunyelwe nguNkulunkulu. Ngibonga kakhulu. Kubongwa kakhulu !!
UDkt Kaveer Ratan usindise iholide lami. I-Optismile iyihhovisi elivelele, elisesikhathini futhi elisezingeni eliphakeme lamazinyo. Ukuthola ukulungisa amazinyo ami okufakelwa aqhekekile kusho okuningi. Ngiyabonga.
USharon Elliott Taylor
Ngisuke e-Australia ukuyokuvuselela ukumamatheka kwami ​​ku-optiSmile eKapa. Kwangihlaba umxhwele kakhulu ubungani babo namasu nemishini yabo esezingeni eliphezulu. Ngibonga ngokukhethekile kuDkt Kaveer Ratan ngobuhlakani bakhe, ukuzinikela nokunakekela. Ngijabule ngemiphumela yami futhi ngincoma kakhulu i-optiSmile ngazo zonke izidingo zakho zamazinyo.
16:32 26 Okthoba 16
Ngibe nokuhlangenwe nakho okuhle kulesi sikhungo sobuciko. Nakanjani ngizobuyela ukuzohlanza.
09:51 14 Okthoba 16
14:09 06 Septhemba 16
Thanda isiza esisha - sisha futhi sihlanzekile
15:55 31 Julayi 16
Angikahlali esihlalweni nesevisi yamakhasimende isivele iyamangaza. Ngiphuthelwe ukuqokwa kwami ​​futhi ngathola ukunakekelwa nokunakwa kuphela. Akuvamile kulezi zinsuku! Ngibheke phambili ekwelashweni kokuqala.
15:12 26 Meyi 16
I-OptiSmile ingudokotela wamazinyo ohlanzekile, onobungane kakhulu nobuchwepheshe obukhulu kunabo bonke engake ngababona. Ngingene ukuzohlanza futhi isevisi ingeyesibili. Kunconywe kakhulu!
Ngisebenzise lo dokotela wamazinyo okokuqala ePerth, e-Australia, lapho ngathola khona ingozi yebhayisikili futhi ngidinga ukulungisa amazinyo ami amaningi. Manje bengikulo mkhuba omusha eKapa (ngihambile ngivela eNorway ngokushesha nje lapho umkhuba uvulwa!), Futhi kuyinto enhle impela. Ubuchwepheshe besimanje, obunobungane kakhulu, obuchwepheshe nobunolwazi kakhulu. Ngiyayincoma impela.
Hewu! Lokhu kufanele kube yindawo enhle kunazo zonke, isimo sobuciko, ihhovisi lamazinyo elinobungane nelinolwazi.
UDkt Yudelman wenza ukuvakashela udokotela wamazinyo kube yinto emnandi !!
Okuhlangenwe nakho okuhle nokuhle kakhulu. UDkt Clifford ngokusobala uyazifela ngendima yakhe futhi unikela ngomsebenzi ohlukile. Ukubonisana okujulile ngaphambi kokuhlolwa kwami. UDkt Clifford wangibeka ngokukhululeka ngemuva kokuthi ngichaze ukwesaba kwami ​​kokuya kudokotela wamazinyo.
Abasebenzi banobungane kakhulu futhi bayafundisa.
Ihhovisi ... vele WOW! Ubuchwepheshe obusetshenzisiwe ngaphambili kanye nemibono evela ehhovisi ngokubuka itheku iyathandeka.
Okuhlangenwe nakho konke bekumnandi, ngiyabonga uDkt Clifford noDenise!
Ngiseholidini eKapa. Ngihamba ngale ndawo nsuku zonke ngisendleleni eya ejimini. Konke kubukeka kukusha sha, kuhlanzekile futhi kuphezulu kakhulu. Nganginomdlandla wokuthi ngicelwe ezinye izintengo ezilinganiselayo ikakhulukazi uma kuqhathaniswa neLondon. Nginqume ukuyizama futhi ngabhukha ukuze ngihlanzeke. Ngihlabeke umxhwele ngezinga lenkonzo nendlela uDkt Yudelman aqaphe ngayo. Ngayithanda kakhulu kangangokuba ngabuyela emuva ngosuku olulandelayo ukuyongena esikhundleni sokugcwaliswa kwensimbi okudala. Amahloni anginaso isikhathi esithe xaxa eKapa ngaphandle kwalokho bengizobe ngikhona izikhathi ezimbalwa. Kuyaqabukela nginike noma yini ukuqala okungu-5 kepha le ndawo iyangiphakamisa izithupha
Vele ngibe nohambo oluqondisiwe lwalo mkhuba omangalisayo wamazinyo obuchwepheshe obukeka ngendlela emangalisayo ngifisela umngani wami wakudala impumelelo kulo msebenzi omusha
09:54 16 Okthoba 15
Uchwepheshe kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. Siyabonga ngenkonzo enhle.
12:38 01 Okthoba 15
16:15 28 Septhemba 15
Umsebenzi oncomekayo ovela kulayini omude bamazinyo nabathwebuli zithombe ...